Jaceyl waa jaceyl, qaraar iyo macaan sida uu kuu helaba waa nasiibkaaga. Balsa waligaa ogaaw JACEYL macaan iyo qaraar labada waa inuu lahaado. | Somaale.com
Jaceyl waa jaceyl, qaraar iyo macaan sida uu kuu helaba waa nasiibkaaga. Balsa waligaa ogaaw JACEYL macaan iyo qaraar labada waa inuu lahaado.
JACEYL aan labada is jecel u wada ooyin, oo u ilmeeynin inbadan, ma noqdo mid macaan iyo dhadhan lo aayo mustaqbalka yeesho hadii aan si kale u dhaho, in aad markasta wax macaan uun cuntid waad iska nacee, oo waxyaabo kala bedelan ayaad u baahantahay, waa dabeeciga bani aadamka oo laga yaabanyahay taasna. Balsa waxaa dhab ah in qofka aan waligiis murugo arkin uusan waxba ka aqoonin farxad, maxaa yeelay ma aqoonsan kartid waxa aad heeysatid adiga oo aysan kugu dhicin, ama ku qabsanin wax ka duwan
waxa aad caadi ahaan la kortay, ama cagsiga nolosha aad horay ugu noolaal jirtay, tusaala ahaan hadii aad markasta qofta aad jeceshahay aad waxwalba heshiis ku tihiin, waxaa muhiim ah in aad mar uun is qilaaftaan si aad markaad heshiisiin micnahiisa u ogaatid xaqiiqo ahaan. Waa su’aal biliaadanka ku soo noqnoqota inbadan, markuu qof walba wax uun iska dareemo ama iftiin caashaq u soo ifo, is weeydiiyo. Maxaa marka hore loogu jeesjeesaa
dadka jaceylku gacanta ku haayo? Maxaa inbadan oo naga mid ah u beenshaan in jaceyl jiroäba? Waa yaab, soo maahan aqli yaro iyo damiir la’aan in aan dadka wax jecel markeena hore ku qosolna, qaarkeen dad waalan ama maskaxdii isku dardarsantay u arkaan kadibna markii maalinkeena la soo gaaro ay calaacal, iyo ma maleeyneeynin meelaha la wareegno, lana ooyno, jaceylka iyo shoogka weeyninka badan uu nolosheena sida lama filaanka ah ugu soo biiray??!
! Inta aadna is warsanin waxa jaceyl yahay, suaalaha aan kor ku soo xusay is weeydii!! . Nasiib wanaag in badan oo ka mid ah dad waxeey aaminsan yihiin amaba ku qanacsan yihiin inuu jaceyl yahay laba qafood ama lamaano jaceyl iyo gacaltooyo aan inta isku heeynin isla wadaagay, ruuxba ruuxa kale noloshiisa ku qanacsan tahay, oo uu hayo hami joogta, farxad ka qaado aragiisa/maqalkiisa, dareen xad dhaaf ah iyo fir-fircooni hor leh uu dareemo markuu qofkaas arko, islana wadagaan bogta xanuuneyso ee ku wada taala una baahan dhayida iyo daawada aan dhaqtar heeysanin.
Qof wax jecel waa qof aan dhihi karno ma qabo indhu uu war ku arko, aqlina warkiisa iska dhaaf, waxaan dhihi karaa qofka wax jecel aqligiisa iyo qalbigiisa waxaa koreeya QALBIGIISA, taas uu u saamaxi doonin inuu si sax ah u fekero, ama arko xumaanto ama xanta dadka kale ka arkaan qofkiisa/laamahiisa uu jecelyahay. Qofka aad dhabta u jeceshay waxaad u noqonee janno, asna Illaah naar kaagama dhige, waa kaa darnaanaa ama waa kula mid.
Daacad, eray macaan iyo wada hadal aad aqligiisa/aqligeed la hadleyso ayaadna isbari doontaa hadii aadna horay u aqoonin markii aad soo rugtid bagga CAASHAQA, naftaada qof ka qaalisan ay gacantaada soo gasho, ilaa aad iska dhaadhacsiisid in qofkaan dhimanaayo hadii aad ka tagtid, ama aad adiga dhimaneysid hadii aad ka dheeraatid baahida aad u qabtid asiga/ayada darteed. Sidaas darteedna ayaad u ilaalisid sida caruurta, dhalada,
ama ukun madaxaaga saaran oo kaa dhici rabto qofkaas naftaasa ka qaaalisan oo aad waxwalba u hurtay! Inta wax jeclaatay iyo kuwa wadda loogu soo jiraba mid ayaa isku raacay taaso ah in qofka la jacel uu yahay qofka ugu qaalisanbiliaadanka, dunida aad u jeedid iyo inta nuuxsata. Maxaayeelay nafsada wax jecel waxaa mar walba ka qaalisa nafta ay jeceshahay. Markaad arageeda/maqalkeeda waaydana ay kugu abuurmayso murugo, cabsi,
tabar dari, wel-wel, walbahaar, hurdo la’aan iyo caajis hor leh, mana arki doontid waxaas oo astaama jireed iyo mid maskaxeedba leh xaalad kale oo kugu abuuri kartid, ama aad sidaas oo kale ula murugoon kartid. Midka uu jaceyl rabo inuu ka qaado daaha saaran qalbigiisa cusub wiil iyo gabar, waxeey markasta ku jiraan mowjada feker ah, himiladiisana wuxuu u dhaafaa ama u dhigaaliyaa ruuxaa u jeclyahay. Waxayna dib u soo celisaa xasuustiisa,
waxaana ku abuurma xiisad caashaq, oo uu weligiis hilmaami doonin, iyo sawirka qofka uu jeclaaday oo qalbiga ku sawirma. Wiilkaas iyo gabadhaas waxeey go’aan ku gaaraan ayeey ku wada shaqeeyaan, sharci ayaga u gooni iyo xeerar aan laga gudbi karin ayeey buuga caashaq ku wada qortaan iyagoo kalsooni buuxda isku qaba, waxa ay wax u sameeynaa uu yahay jaceylkooda iyo qalbiyadooda ay la jeclaan lahaayeen in ay mid yihiin ama kala bedeshaan si qofkasta kiisa u ilaashado. Waxeey ka tashadaan mustaqbalkooda dheer iyo noloshooda sida ay u midoobi laheeyd. Maalinba maalinta ka dambeysa
, waxaa u dhasha maalin cusub, oo waligood kalama dhergaan, maalin iyo habeen, daqiiqad iyo saacad walbo hadii is ag fadhiyaan, ee la kala wadi maago kuma jiro mid raali ku ah in ay kala tagaan!. Waxeyna mar walba is xasuusiyaan jaceylkay isu qabaan inuu sii xoogeystay, uuna yeeshay, midib cusub, kana macaan badanyahay kii shalay, weji cusub oo aan horay loogu aqoonin ayeeyna qalbiyadooda ka wada arkaan ayagoo is tusaa, oo eray dareenkooda u bedelaa, iskuna dhiirigelinaa in qof walba noqdo qof kale ceelka oo sirtiisa ku duugo,
kuna aamino oo inta kale kaga maarmo qofkaas dartiis! Niyada ayeey isku dhisaan, oo isku qanciyaan in ay is yeelan doonaan, oo mar aan dheereeen ay is dhaxli doonaan. Faa’iidooyin iyo qaasarooyin farahaas ka badan ayuu leeyahay jaceyl. Laakiin waxyeelada ugu daran ee jaceylku keena waxaa weeye marka ugu horeysa oo aad dareentid inuu ku taabtay talaalkii jaceylka, qalbigaaga wax cusub oo aadna aqoonin sida aad eray ugu fasiri laheeyd ay kaa taabtaan, markaaad kaligaa tahayna kula hadlaayaan, oo maskaxdaada buuxiyaan adigoonan isku fasari karin xataa
, sida in aad xabsi ugu jirtid wax aadna aqoonin, dadkuna kula arkin hadi ay ku caawin lahaayeena! Taas oo micnaheedu tahay xanuun cusub oo ku soo kordhay dareenkaaga iyo jirkaaga, iyo shaqsiyadaadii hore oo la quursaday, ileen mid cusub oo aad ku qaabishid waxa kugu soo socdo ayaad u baahantahee!! Calaamooyinka jaceylka bilawga ah lagu yaqaano waxaa ka mid ah: Jirkoo ku jajaba, oo aad xanuun iyo daal joogta ah ka dareentid, xataa hadii aadna maantay sariirta ka kicin. Niyad xumi, xanaaq fudud oo waxwalba aadna u adkeysan karin, isnac, kaliahaansho, dadka kale warkooda oo aad karaahsatid, raashiinkooda ka go’did, iyo is daryeel la’aan jirka iyo maskaxdaadaba ah.
Daawadaada waxaa haaya oo lagaa rabaa in aad ka heshid kii/tii aad jeclaatay amaba aad codkiisa iyo aragiisa maqashid/aragtid taasi waa qasaarada u leeyahay jaceyl, maxaayeelay qofkaan iyo adiga daqiiqad walba islama qaadan kartaa oo adduun ayaa inku wada xiran, qofwalbana teeda ayaa heeysata. Hada iyo Talo si aad naftaada u badbaasid waa inaad iska yareysid feker joogta ah, nafsadaana mashquul kaga dhigtaa waxyaabo kale
, laakiin ka digtoonaaw, kana fogow filimada jaceylka daawashooda. Maxaayeelay qofka wax jecel waa u hiyikacaa waxaana ku saa’idaa dhadhanka boholyowga badan ka buuxo, oo soo wajahay nolashiisa/nolosheeda. Maskaxdaada waxay u shaqeysaa si kale taaso ka dhex guuxeeyso rajo xun iyo amaan darada la soo daristay shaqsiyadaada iyo qalbigaaga, waa JACEYLE! Haddaba aan runta kuu sheego jaceylku waa wax aan sahlaleeyn, oo aan dhihi karo naftaada qaaliga ah ayuu kuu aqoonsan karaa. Qaas ahaan dhalinyarta sida fudud u isticmaal, oo waxashnimo iyo fool xumado ka buuxda, iyadoo wiil iyo gabar erayga jaceyl u isticmaala si yar, oo fududeysi saaida ah ka muuqdo, ama isagoo
/iyadoo doonaaya inuu dano gaar ah ku gaaro qofkaan/qoftaan uu jaceylka ula kaca ugu abuuray, ama ula wado balsa uu ogyahay inuu jeclayn ama sii jeclaan doonin. Digniin Ha ku dhihin naf aadan jaceyl u heynin waan ku jeclahay, si aad niyada ugu dhisto ama aad kaga badbaadid calaacalka iyo raja xumada qofkaas/qoftaan soo wajahi doona. Maxaayeelay kor iyo hoosba maalin uunbaad RUNTA qaraar dhigaha kaga dilaacin doontaa qofkiiyoo intaaan kaa jecel, kaaga rabitaan badan, kaaga kalsooni iyo rajo badan!.
Hadii aad u baahanatahay in aad ogaatid sida aad ku badbadin kartid jaceylkaaga, isla markaasn oo u noqdo mid waara la soco qaybaha danbe ee qoraalada:” Noloshu waa jaceyl, jaceylkuna waa nolol!” adigoo mahadsan aqriste, waxaan kaa codsanaa sida aqriste qaali ah in aad ii soo celisid wixii dhaliil iyo saxitaan ah oo ku aadan qoraalkayga, iyo waliba hadii aad i dheertahay aqoon ku saabsan jaceyl. Mahadsanid. Igala soo xariir:samasam_1989@hotmaill.com. Waa qalinkii Ifraax yuusuf (IFKA).
Prof. C/Weli Gaas maka Jawaabi doonaa hadalkii Maadaxweynaha Soomaaliya ee ahaa "in badda Soomaaliya Territorial Waters kusoo kooban tahay 12 mayl"
Kulan ballaaran ay ka qeyb galeen Maamulka G/Sh/Dhexe iyo Odayaasha dhaqanka oo maanta ka dhacay Jowhar (Sawirro)
Sheekh Axmed Cabdi Dhicisoow Guddoomiyaha majmaca culummada Soomaaliyeed oo sheegay inay abaabulayaan dibadbax looga horjeedo Dastuurka Cusub 0